Ungayitshintsha njani i-DNS ukuphucula ukukhangela kwi-Intanethi | IPhone iindaba
Isantya esitshiza ngaso kwi-intanethi ayixhomekeki kuphela kwisantya esisivumelwano. Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luyaqonda ukuba kutheni une-100MB (okanye ndifaka ngaphezulu) kwaye ukulayishwa kwamaphepha ewebhu akukhawulezi njengoko kufanelekile. Sele sikuxelele indlela yokuphucula unxibelelwano lwezixhobo zakho kwinethiwekhi ye-WiFi yendlu yakho, Okubalulekileyo, kodwa kukwakho nezinye iinkcukacha ezibalulekileyo ezinokuphucula isantya sokukhangela, kwaye ngeli xesha siza kuthetha ngenye yezona zibalulekileyo: i-DNS. Yintoni i-DNS? Ngaba kufanelekile ukutshintsha i-DNS? Sichaza yonke into engezantsi.
1 I-DNS sisiguquli esisisiseko
2 Kutheni utshintsha i-DNS?
3 Ungayitshintsha njani i-DNS kwi-iOS (i-iPhone kunye ne-iPad)
4 Ungayitshintsha njani i-DNS kwi-OS X
I-DNS sisiguquli esisisiseko
Xa sidibanisa iphepha lewebhu, umzekelo uGoogle, sonke sibhala u "www.google.es" ebusweni bedilesi, kodwa eyona dilesi yelo phepha ngu "216.58.210.163". I-DNS yenza ngokuchanekileyo ukuba, banoxanduva lokudibanisa idomeyini nganye nedilesi yayo yokwenyani, ukuze kungabikho mfuneko yokuba sizinkqaye ezo ziqendu zamanani zingaqondakaliyo kwaye sikwazi ukusebenzisa imimandla yazo, oko kukuthi, amagama ewebhu. Kulula ukuyiqonda ke loo nto Kuxhomekeka ekubeni sikhawuleze kangakanani iseva yethu ye-DNS, sinako ukufikelela kumaphepha ewebhu esifuna ukuwatyelela kwangoko okanye kamva..
Kutheni utshintsha i-DNS?
Umboneleli wethu we-intanethi une-DNS emiselweyo ngokungagqibekanga. Ngamanye amaxesha ziiseva ezilungileyo ezisinika isantya sonxibelelwano esihle, kodwa ngamanye amaxesha akunjalo. Ukuba ucinga ukuba amaphepha akho athatha ixesha elide ukulayisha, ungazama ukutshintsha i-DNS yomboneleli wakho kwabanye abaziwa ngokuchanekileyo, njengeGoogle.
Ngokufanelekileyo, tshintsha i-DNS ngqo kwi-routerKe ukuba nasiphi na isixhobo esidibanisa inethiwekhi yakho sisebenzisa ezi DNS zintsha, kodwa njengababoneleli abaninzi "vumela" olo khetho, siza kuchaza indlela yokuzitshintsha kwisixhobo ngokwaso.
Ungayitshintsha njani i-DNS kwi-iOS (i-iPhone kunye ne-iPad)
Ukutshintsha i-DNS kwi-iOS kufuneka uye kuseto lwesixhobo, kwaye kwicandelo le-Wi-Fi cofa ku "i" ngasekunene kwenethiwekhi odityaniswe kuyo. Nje ukuba ungene ngaphakathi kweenkcukacha zenethiwekhi, tshintsha i-DNS ebonakala ngokungagqibekanga kwabo ufuna ukongeza (Kumzekelo wethu ndongeze iGoogle's: 8.8.8.8, 8.8.4.4). Elula njengaleyo.
Ungayitshintsha njani i-DNS kwi-OS X
Kwi-OS X inkqubo ayicacanga, kodwa ilula nje. Yiya kukhetho lweNkqubo> Inethiwekhi kwiCandelo eliPhucukileyo yiya kwithebhu ye-DNS.
Ezantsi kwefestile uza kubona u "+", ucofe kuyo kwaye ungeze i-DNS oyifunayo (kumzekelo wethu, kwakhona ndikhethe uGoogle.. Cofa ku-Kulungile emva koko ufake isicelo. Emva kwemizuzwana embalwa yonke into iya kulungiswa ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 9 » Ungayitshintsha njani i-DNS ukuphucula ukukhangela kwi-intanethi
Nokubonga (@nokubonga) sitsho
Kwaye yintoni indawo yokukhangela? Ubeka "station" kodwa yintoni uncedo?
Phendula kwi-omar ♺ (@enjoidesign)